QISO CAJIIB AH. Nin 70jir ah ayaa Kaadi ku dhagtay - iftineducation.com
QISO CAJIIB AH. Nin 70jir ah ayaa Kaadi ku dhagtay
iftineducation.com – QISO CAJIIB AH.
Nin 70jir ah ayaa Xanuunsaday, kaadidii ayaa ku Dhegtay, Markaas ayaa Hospital la Geeyay.
Dhakhaatiirtii ayaa u Sheegtay inuu u baahan yahay Qaliin. Qaliinkii ayuu Aqbalay Maadaama Xanuun badan uu Dareemayey. Markii Qaliinkii loo Dhameeyay ayuu Dhakhtarkii ku soo Dalacay Lacagtii. Ninkii ayaa aad ula yaabay Biilka, ka dibna Bilaabay inuu Ooyo. Dhakhtarkii markuu Arkay Odaygii oo Oynaayo ayuu u Sheegay in Lacag haduusan Haynin laga Sugi karo, balse Ninkii ayaa ku Jawaabay:- Lama Ooynayo inay Lacagta badan tahay Darteed. balse Waxaan la Oynayaa, Garasha La’aanta Nimcada Ilaahay. 70 sanno ayuu ilaaheey Kaadi iga Keenayay, Hal marna Lacag iguma soo Dalicin, balse ibni’aadam, Hal mar ayuu wax ii qabtay, Lacagna wuu igu soo Dalacay.
Aqristow mar walbo xusuusnow nimcada alle kugu galaday mar walbo dheh Alxamulilaaah sacad walbo iyo daqiiqad walbo ujeedada maha in aad Aqriso ood commnti ama like sarto ee ujedadeeda waxaan ku xasuusin in aad waqti kasto aad xasuusati nimcada alle mar walbo dheh ALXAMUDILAAH
(ILAAHOOW ISLAAMKA U GAR-GAAR)
Yurub oo soo bandhigaysa qorshihii soogalootiga ee muranka dhaliyay
Australia oo ka digtay caruurta argagixisada